Yini ongayibona eValencia | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona eValencia
Maria | | Spain amadolobha, Valencia
UMbhishobhi Omkhulu waseValencia
IValencia yidolobha lesithathu ngobukhulu eSpain futhi ingenye yezindawo zokuvakasha eziyinhloko ezweni, hhayi nje kuphela ngokombono wamasiko kanye ne-gastronomic kodwa futhi ne-ecotourism. Amabhishi alo athokozelwa kakhulu ngabathandi bolwandle futhi ngenxa yesimo sezulu esipholile, iValencia iyindawo enhle ongayivakashela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Uma ufuna ukujabulela idolobha laseTúria njengenye iValencian, awukwazi ukuphuthelwa okuthunyelwe okulandelayo lapho sithola khona izindawo ezinhle kakhulu zokuzibona eValencia.
1 Umakhelwane wase-El Carmen
1.3 IValencia Cathedral
1.4 Imakethe yezinhlanzi yaseValencia
1.5 Imakethe Ephakathi
3 Izingadi Zomfula iTuria
5 Ku-horchata emnandi!
Umakhelwane wase-El Carmen
Kutholakala esikhungweni esingokomlando saseValencia, indawo yaseCarmen iyindawo yokuzulazula nokulahleka. Enye yezindawo ezinhle kakhulu edolobheni ezakhulela phakathi kwezindonga zobuKrestu nezamaSulumane eseziyindawo yokuzilibazisa namasiko eValencia zigcwele izindawo ezinomoya wobusha ophelele ukunambitha ukudla okuhle kwasekhaya nakwamanye amazwe kanye nokuphuma emaphathini.
Ngaphezu kwalokho, endaweni yezimpawu yaseCarmen yaseValencia kukhona ezinye zezikhumbuzo ezivelele kakhulu zedolobha:
Babeyingxenye yodonga lwangezikhathi zasendulo futhi babenomsebenzi wokuzivikela. Yibo kuphela amasango eValencia kanye neTorres de Serrano agcinwe njengezikhumbuzo eValencia.
Zingezinye zezimpawu zeValencia kanye neTorres de Quart. Zitholakala eduze komfula omdala waseTria futhi ungafinyelelwa ukuze uzindle ngomuzi kusukela phezulu kwemibhoshongo.
Ubuwazi ukuthi iChalice Engcwele iseKhathedrali yaseValencia? Etholakala ePlaza de la Virgen, eduze ne-Basilica of the Virgen de los Desamparados, kwakhiwa ithempeli ezweni elake langena ethempelini lamaRoma kanye nasendaweni yamaSulumane. Ingcwelisiwe ngo-1238, inikezelwe kuJaume I uMnqobi futhi isitayela sayo esivelele yiGothic, yize izakhi ze-Renaissance, Baroque kanye ne-Neoclassicism nazo zingatholakala, ngoba ukwakhiwa kwayo kwathatha amakhulu eminyaka.
Ngaphakathi kweCathedral kukhona iCathedral Museum, ekhombisa imisebenzi engama-90 yezitayela ezahlukahlukene zobuciko, egqamisa phakathi kwayo imidwebo kaMaella noGoya noma imidwebo yephaneli kaJuan de Juanes kanye neVergen de los Desamparados de Valencia namanye amaKrestu Izinsalela. Ngaphandle, ithempeli lakhiwa iPuerta de l'Almoina, iSahluko seSant Jordi, umbhoshongo weMiguelete osesitayeleni seValencian Gothic, iPuerta de los Apóstoles kanye nePuerta de los Hierros.
Isithombe | I-Tripkay
Imakethe yezinhlanzi yaseValencia
Ingesinye sezakhiwo eziseValencia futhi ngesinye sezibonelo ezinhle kakhulu ze-European civil Gothic enomsebenzi wokuhweba nowokuhweba. I-UNESCO yamemezela njengeNdawo Yamagugu Omhlaba ngo-1996 futhi yahlonishwa njengeSikhumbuzo Somlando-Sobuciko kusukela ngo-1931. Imakethe yezinhlanzi yaseValencia yakhiwa phakathi nekhulu le-XNUMX elaziwa ngokuthi iValencian Golden Age ekukhuleni okuphelele kwezomnotho kweCrown of Aragon.
Kusukela ngeNkathi Ephakathi, iMakethe Ephakathi yaseValencia ibilokhu inebizo lokuhweba. Phambilini lo msebenzi wawenziwa ngamatafula angaphandle futhi ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX kwathathwa isinqumo sokwakha ibhilidi elizokwamukela imakethe. Ekuqaleni kwekhulu leminyaka, amandla ayo bekufanele andiswe futhi ngalokhu wakunikeza ubuhle bamuva obabudume kakhulu ngaleso sikhathi, ngokusekelwe ezintweni ezifana ne-ceramic, i-iron noma ingilazi, okufeza ukwakheka nge-optical enkulu nepulasitiki umphumela.
Selokhu yavula iminyango yayo ngonyaka we-2003, i-Oceanogràfic yeDolobha Lobuciko neSayensi eValencia isibe yindawo enkulu kunazo zonke yezilwane zasolwandle eYurophu. PNgenxa yobukhulu bayo nokuklanywa kwayo, kanye nokuqoqwa kwayo okubalulekile kwebhayoloji, sibhekene ne-aquarium eyingqayizivele emhlabeni lapho kumelwa khona izinto eziphilayo zasolwandle eziyinhloko zeplanethi. futhi lapho, phakathi kwezinye izilwane, amahlengethwa, oshaka, izimvu zamanzi, amabhubesi asolwandle noma izinhlobo zezilwane ezinelukuluku njengama-belugas nama-walrus zihlala ndawonye, ​​okuwukuphela kwezinhlobo ezingabonwa e-aquarium yaseSpain.
Omunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu ye-Oceanogràfic de Valencia ukuzibophezela kwayo emvelweni kanye nokukwazi kwayo ukuqwashisa ngokubaluleka kokuyinakekela. Umqondo walesi sikhala esiyingqayizivele ngukuthi izivakashi e-Oceanográfic zifunde izici eziyinhloko zezitshalo zasolwandle nezilwane ezivela kumyalezo wokuhlonipha ukongiwa kwemvelo.
Izingadi Zomfula iTuria
Leli paki elisemadolobheni elingamahektare angu-110 lingenye yamapaki avakashelwa kakhulu eSpain. Inomsuka wayo ngo-1986, lapho uzamcolo wakhipha indawo engenalutho eyayisetshenziselwa ukuzilibazisa kwamaValencians. ITuria Garden nayo inqunyelwe iBioparc, i-avant-garde City of Arts and Sciences, Gulliver Park, Palau de la Música naseCabecera Park.
Izinkulungwane zabantu zivakashela minyaka yonke futhi amaValencians amaningi athanda ukuba namapikiniki futhi achithe usuku ngezimpelasonto.
IBioparc iyi-zoo etholakala ekupheleni entshonalanga yeTria Garden eyavulwa ngonyaka we-2008 ukuze ithathe indawo yeZoo endala yaseValencia Nursery. Ipaki ihlukaniswe ngama-biomes amane: i-savanna enomswakama, i-savanna eyomile, amahlathi e-Equatorial Africa neMadagascar. Zonke zihlala izindlu ezifika ku-4000 zezinhlobo zezinhlobo ezingamakhulu.
Lesi sikhala semvelo silungele ukuvakasha nomndeni. IBioparc yindawo yokuqala nemilingo enohlelo lwezinto zamahhala zokuzilibazisa ezinokuqukethwe kwezokungcebeleka nezemfundo okukhombisa izivakashi ukubaluleka kokulondolozwa komhlaba.
Ukuvakashela izivakashi kuhlala kukwenza womile, ngakho-ke akukho lutho olungcono lokuthola amandla akho kunokuthola i-horchata eyi-Valencian horchata. Lesi siphuzo esimnandi esithandwa kakhulu eSpain silungele ukushisa ukushisa futhi sithole ukunambitheka kweValencia. Kunezindawo eziningi ezisezingeni ezihlakazeke edolobheni. Ithiphu: hamba i-horchata yakho namanye ama-farton, uswidi ojwayelekile ohlale uhambisana ne-horchata. Kumnandi!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Yini ongayibona eValencia
Yini ongayibona ku-Formentera
Yini ongayibona eValldemossa, eMallorca